सूर्य, पृथ्वी अनि दिन र रातलाई धन्यवाद
सकु थापा — Mon, 04/25/2016 - 16:14
धन्य सूर्य, धन्य पृथ्वी, धन्य दिन, धन्य रात । यी सबैलाई किन धन्यवाद दिए ? साच्चै प्रश्न उठ्न सक्ने कुरो हो । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्ने कुरो पनि छ । वास्तवमा सूर्य, पृथ्वी, दिन, रात सबैलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । सृष्टिलाई निरन्तरता दिन यी सबैको भूमिका त्यति नै महत्वपूर्ण रहेको छ । चाहे त्यो बोट विरुवा होस् वा जीवजन्तु वा मानव नै । सूर्यको प्रकाशले उज्यालो दिन्छ र दिन हुन्छ । दिनमा मानवले आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु जुटाउने, उत्पादन गर्ने भनौ आफ्ना आवश्यकताका पूर्तिका लागि उपभोग गर्दछ । त्यो कहाँ गर्दछ त ?
सकु थापा — Mon, 04/25/2016 - 15:57
धेरै परिवर्तन भएछ, धेरै वर्षपछि फर्कदा गरेको अनुभव हो यो । हरेक दश–दश वर्षमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कथन पनि छ । त्यसैले पनि यो कुरालाई स्वीकार्न बाध्य भए । तीसवर्षको पंचायत काल पछि आएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आएको कमी कमजोरीलाई पनि पन्छाउँदै आएको संघीय गणतन्त्रलाई पनि परिवर्तनकै रुपमा लिनु पर्दछ ।
editor — Fri, 03/11/2016 - 02:52
साहित्यकार जगदीश घिमिरेका विविध सम्झनाहरू लेख्नका लागि ममा धेरै विषयहरू छन् । अँझ खासगरी जगदीश दाइसँगका बसाइहरूलाई कुनै लेपन नै गर्नु पर्दैन साहित्यिक लेखको गुत्थी दिन । जबजब जगदीश दाइ हिउँद्का चिसा दिनमा आफ्ना लेखनका कामहरू लिएर मन्थली आउनु हुन्थ्यो म वहाँलाई पछ्याइ हाल्थेँ । कहिले अलि कडा मिजासमा त कहिले अलि नरम मिजासमा मसँग वहाँ वार्ताका लागि सहज रूपमै प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो । मैले करिब आधा दर्जनपटक वहाँसँग भलाकुसारी अँझ साहित्यिक वार्ताहरू गरेको रहेछु । ती सबैजसो कुनै न कुनै पत्रिकामा छापिएका छन् ।
editor — Fri, 02/12/2016 - 05:39
आज पुरा १९ महिना बितेछ, मैले लेख्न पढ्न छाडेको । यस अवधिभरिमा "हाय! हाय !लोकतान्त्रिक न्याय" शीर्षकको एउटा मात्र वास्तविक घटनामा आधारित कथा लेखी अन्तमा अलिकति काल्पनिक कुरा जोडे । २०७१ साल असार २४ गते साँझ ७:३० बजे जग्गा जमिनको साध सीमानाको निहुँमा छिमेकीसँग मेरो छोरा विष्णुको नराम्रोसँग झडप भयो । छोराले गुहार ज्यान बचाउँ भनेपछि छुट्याउन जादाँ हामी बुबा आमा समेत काटिएर सक्त घाइते भयौँ ।
editor — Sat, 01/09/2016 - 17:32
editor — Sun, 12/06/2015 - 17:35
उद्घोषकको हैसियतले परिस्थितिलाई कार्यक्रमको गन्तव्यअनुकूल पारिराख्न मलाई हम्मेहम्मे पर्यो । लामो समयदेखि शिक्षणसिकाइ कार्यकलापमा सहकार्य गर्दै आएकी सुचिता कुमारी देवले यत्तिञ्जेलको गल्तीलाई माफ गरिदिनुस्भन्दा विशिष्ट अतिथिसमेत रहेका शिक्षक रामदेव रजक भक्कानिए । उनीहरूका बीच लामो समयसम्म सहकार्य गर्दा कहिलेकाहीँ तँछाडमछाड भएको हुनसक्छ । त्यो एकोहोरो नभई दोहोरो नै हुनसक्छ । अब ती दिन पुनः फर्कने सम्भावना विल्कुलै न्यून थियो । हुँदा केहीजस्तो नलाग्ने तर नहुँदा केके न बितेजस्तो हुने वातावरण थियो । सबैको मन मलिन थियो । कसैको जीवन नै गुमाउनु परेको जस्तो भान हुन्थ्यो ।
editor — Sat, 11/28/2015 - 19:11
२०७१ भदौ ३ गते मङ्गलबारको दिन सबेरै आँखा खुले । भदौरे झरीले स्वागत गरिरहेको थियो । लामो समयको खडेरीले सप्तरीका कृषक आक्रान्त थिए । अब भने तिनीहरूमा उमङ्ग छाएको हुनुपर्छ । ढिलै भए पनि खेतीपाती लगाउन पाइयो भन्ने लागेको हुनुपर्छ । मनमा नाना थरीका कुराहरू खेलिरहेका थिए । त्यत्तिकैमा पल्लो कोठामा बस्ने शिक्षक मित्र अभितकुमार चौधरीले भने, ‘‘आज तपाईंको साइत बनिरहेको छ । नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छेलाई प्रकृतिले पनि स्वागत गरिरहेको छ ।’’ उनका कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै ‘तपाईंका मुखमा दूधभात परोस्’ भनेर जवाफ फर्काएँ ।
editor — Thu, 10/22/2015 - 23:57
मानिस जन्मेपछि मर्छ यो शाश्वत सत्यसँग कसैको दुई मत हुनै सक्दैन । तर एक दिन मरिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसले आफूले आफूलाई माया गर्छ आफ्नो कायालाई माया गर्छ, आफ्नो छायाँलाई समेत स्नेह गर्छ जबकि उसलाई थाहा छ जीवनमा एक दिन काया, छायाँ, माया, धन, दौलत, प्रियजन सबै छाडेर अनन्त यात्रामा निस्किनै पर्छ तैपनि मृत्युपर्यन्त ऊ लोभ, मोह र क्रोधबाट पृथक रहन सक्दैन । किनभने संसार मायावी छ र मायावी संसारको मोहबाट जोगीहरूले मुक्त हुने भरमग्दूर प्रयत्न गरे तापनि भोगीहरू मुक्त हुन के सक्थे र यही मायावी समुद्रको म पनि एक थोपा हुँ । म पनि परम्पराबाट हटेर पृथक हुन कसरी सक्थें र ? कसरी सक्नु र ?
editor — Sun, 10/18/2015 - 03:55
Dhurba Rijal — Sat, 08/22/2015 - 13:01
‘यो रेडियो नेपाल हो । राति नौ बजेको समाचारमा स्वागत छ म कोमल वली । सबैभन्दा पहिले यस प्रसारणका प्रमुख समाचारः परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले यस वर्षको एस. एल. सी. परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशित गरेको छ, ……..’
“लौ तेरो रिजल्ट आएछ । अब पास भैहाल्लास क्यार कुन डिभिजनमा हो त्यै थाहा पाउने त होला नि । अहिले थाहा पाउने केही उपाय छैन, भोलि बिहान दुध लिएर तँ बजार जा, म चाहि गोरु लिएर खेतमा जाउँला ।
विक्रम पवन — Sat, 08/08/2015 - 19:53